Resaka manodidina ny zon'ny ankizy
Naly Manjaka il y a 2 années
Resaka re eny rehetra eny ny hoe :''zon'ny ankizy''. Samy manana ny heviny ny olona rehetra momba izany, ary samy manana ny fampiharana azy eo amin'ny zanany (mbola ankizy) ny tsirairay. Ny volana jona no tena mahazo vahana ity resaka zon’ny ankizy ity. Ndao resahana àry.
Nanefa ny trosa 800 tapitrisa Ariary teny amin’ny Cnaps
Manao ezaka mavitrika ny Cnaps hanaitra an’ireo mpitantana orinasa mba hijery ny trosa tokony aloan’izy ireny amin’ny Cnaps. Antoka lehibe ahafahan’ny Cnaps manefa ny adidiny manoloana ireo mpikambana ao aminy ny fidiran’ny vola fa miantoka ny fisitrahana zon’ny mpiasa koa izany.
Mahaontsa ny poety ny hanoanana
Ny 15 jona no notondroin’ny Firenena Mikambana ho andro manerantany hanamarihana ny ady atao amin'ny hanoanana. Olona maro no voakasik'izany eto amintsika. Maneho ny fihetseham-pony ny poety Toetra Ràja, miara-dalana amintsika eto fotoana vitsivitsy izao, manoloana izany. Ndao àry.